एक नर्सको आह्वानः अहिले बिरामीको सेवामा खटौं, अन्यायको हिसाब पछि गरौंला :: Setopati
भावना पोखरेल वैशाख २२
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको एउटा सम्मेलनमा भनेको भाषण अहिले भाइरल छ। जसमा भनिएको छ, 'भारतले गरेको कोरोनाको सफल व्यवस्थापन विश्वकै लागि अनुकरणीय छ।'
नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै उन्मुख छ। भारतका जस्ता दृश्य र तथ्यांकहरू अब हाम्रा समाचारमा पनि दिनहुँ बढिरहेका छन्। एक वर्षअघि अमेरिकामा कोरोना संख्या उच्च हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भनेका थिए, 'न्यूयोर्कले त सम्हाल्न सकेन भने हाम्रो त स्रोत साधन झनै कमी छ।'
त्यो अन्तर्वार्ता धेरैले सुने कि सुनेनन्, हामीसँग सिक्ने समय चाहिँ धेरै थियो। के कति सिकियो र स्वास्थ्य प्रणालीमा कति सुधार भयो? आमजनतामा अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा विज्ञप्तिले सातो गएको छ, 'अस्पतालमा अब बेड दिन नसकिने भएको छ।'
अन्त्यमा नर्स दिदीबहिनीहरू, जतिसुकै पीडा र असन्तुष्टि भए पनि हाम्रो काम 'पेसा' भन्दा माथि हो। यो मानवीय संकटको घडी हो। यतिन्जेल हामीले भोगेको गलत व्यवस्थापनको नमिठो अनुभवको परिणाम निर्दोष जनताले भोग्न कदापी हुँदैन।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २२, २०७८, १५:३६:००
मजदुरी गरेर चार सन्तान एक्लै हुर्काइरहेकी ३२ वर्षीय निरु
'आत्मविश्वास जोगाइराख्न निकै गाह्रो हुने रहेछ'